Global Voices teny Malagasy » Ny Tetikady ”Fahafahana Miparitaka” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Oktobra 2017 16:01 GMT 1	 · Mpanoratra Rebecca MacKinnon Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Arabia Saodita, Iràka, Syria, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Vaovao Mafana
Mamatsy vola ny fanamboarana fitaovana iray fitorahana blaogy Arabo  ny Spirit of America .
iUpload  no mpivarotra izany. Manomboka amin'ny volana Desambra ny fanandramana Beta. Ity ny fomba hamaritany ilay tetikasa:
Mamatsy vola ny fanamboarana fitaovana iray ho fitorahana blaogy (Web logging) Arabo izahay ary, miaraka amin'ny fanohanan'ireo mpanome an-tsitrapo, hampiantrano ireo blaogy ireo izahay izay, tsy hisy vola hiala amin'ireo blaogera. Hahafahana mamorona blaogy amin'ny fomba tsotra izany. Hanome feo ho an'ireo miasa ho an'ny fahafahana sy demokrasia ao amin'ny tontolo Arabo. Ary hanampy azy ireo mba hifandray moramora kokoa sy hizara hevitra amin'ny sahala azy.
Miantso fanampiana ara-bola ity tranonkala ity. Bebe kokoa mikasika ny fampiantranoana sy ny fikasana amin'ny hoavy:
Ireo bilaogy tsirairay novokarina tamin'ny fampiasàna ilay fitaovana fanoratana bilaogy amin'ny teny Arabo dia hisy habaka ho eo ambany fifehezan'ireo fikambanana miaraka miasa aminay, toy ny “Ireo Naman'ny Demaokrasia”. Io toerana io na “toy ny toerana hofaina” dia ho ampahany iray ery akaikin'ny lohatenin'ny bilaogy (ambony indrindra amin'ny pejy) ary amin'ny tsanganana havia. Ho ampiasain'ireo fikambanana io habaka io mba hampiroboroboana ireo vondrona, ireo olona tsirairay ary vaovao izay, ao anatin'ilay sary goavana, manome vahana ny fahalalahana, ny demaokrasia ary ny fandriampahalemana ao amin'ny faritra. Araka izany, ny tsirairay izay mamorona bilaogy dia hampiroborobo ny fampitam-baovao sy fomba fijery misy fandeferana ao anatin'ny tontolo Arabo. Ireo Naman'ny Demaokraisa dia hampiasa ilay habaka mba ho fampahafantarana ireo vondrona miady hisian'ny demaokrasia, ireo torohay momba ny fifidianana sy ireo vaovao mifandraika amin'izany. Ireo bilaogy noforonina tao amin’ Ireo Naman'ny Demaokrasia dia ho masoivohon'ny demaokrasia ao anatin'ny tontolo Arabo.
Ireo Naman'ny Demaokrasia.
Ireo andianà bilaogy voalohany dia ho eo ambanin'ny ‘Ireo Naman'ny Demaokrasia’. Hifantoka amin'i Iràka, saingy na iza na iza, ary na vondrona inona, any rehetra any ka maniry ho ‘naman'ny demaokrasia’ dia ho afaka ihany koa hamorona sy hitantana bilaogy iray “Ireo Naman'ny Demaokrasia” amin'ny teny Arabo, tsy misy vola aloa. Hametraka politika momba ny fampiasàna ny bilaogy sny ny votoatiny ny “Ireo Naman'ny Demaokrasia”.
Mihoatra lavitra noho i Iràka
Raha ampy ny voala voangona, dia hikaroka fikambanana hafa tony fihetsika izahay mba hanaraka akaiky ireo bilaogy any amin'ireo firenena Arabo jafa, toa an'i Arabia Saodita sy Siria. Hotohananay ara-bola ihany koa ny fanamboarana fitaovana iray ho fanoratana bilaogy amin'ny teny Farsi ka dia ho afaka ampiasaina ho any ao Iràna sy ireo Kiorda.
Mba manontany tena aho hoe inona ireo mason-tsivana sy fepetra ho ampiasaina mba ”hametrahana sy hampiharana politika momba ny fampiasana blaogy sy ny votoatin'ny blaogy.”
Amin'ny volana Desambra 2004 isika dia afaka hanontany ireo mpandray anjara ao amin'ny Spirit of America ny ho fomba fiasan'izy io.
(niaraha-namoaka tamin'ny RConversation.com )
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/10/22/109061/
 fitaovana iray fitorahana blaogy Arabo: http://www.spiritofamerica.net/cgi-bin/soa/project.pl?rm=view_project&request_id=78